'पतञ्जलिको जन्म भारतमा होइन नेपालमै' | Suvadin !
पतञ्जलीको जन्मस्थान र संस्कृत भाषाका प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री पाणिनिको कर्मस्थान नेपाल हो। त्यो क्षेत्र अर्घाखाँची र प्युठानको सङ्गमतिर पर्छ। पाणिनिलाई इसापूर्व तीन हजार वर्ष र पतञ्जलिलाई दुई हजार वर्ष पूर्वका ठानिन्छ। पाणिनिले आफू जन्मेको ठाउँलाई शलातपुर भनेका छन्। त्यो अहिलेको पाकिस्तानस्थित लाहोर हो। उनी लाहोरबाट नेपाल आएर तपस्या गरेर अष्टाध्यायी व्याकरण लेखेका हुन्। त्यसका शास्त्रीय प्रमाणहरू भेटिएका छन्।
काठमाडाै‌, असार ६ - हरेक वर्ष २१ जुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका रूपमा मनाउन थालिएपछि योगको चर्चासँगै यसका प्रवर्तक पतञ्जलिको सम्झना गर्न थालिएको छ। पतञ्जलिले योगमा मात्र योगदान गरेका होइनन्, उनले आयुर्वेद र व्याकरणको विकासमा समेत योगदान गरेका छन्।
पतञ्जलिको जन्मको सम्बन्धमा एकमत नभएपनि मेरो अध्ययन र अनुसन्धानले उनको जन्म नेपालकै अर्घाखाँची जिल्लामा भएको देखाएको छ। विभिन्न शास्त्रहरू र स्वयम् पतञ्जलिले लेखेका ग्रन्थको अध्ययनपश्चात मैले मेरो दाबी सार्वजनिक गरेको हुँ।
पतञ्जलिले योग, आयुर्वेद र व्याकरणका योगदानको दार्शनिक अर्थ पनि छ। मानव तन, मन र वचनले स्वस्थ र शुद्ध हुनुपर्छ। त्यसैले पतञ्जलिले शरीर स्वस्थ र शुद्ध राख्न आयुर्वेद, मन स्वस्थ र शुद्ध राख्न योग तथा वचनको शुद्धीकरणका लागि व्याकरणको अन्वेषण गरेका हुन्।
अहिले आएर उनलाई योगका प्रवर्तकका रूपमा मात्र चिनिन थालेको छ। खासमा त्यो शतप्रतिशत ठीक होइन।
पतञ्जलीको जन्मस्थान र संस्कृत भाषाका प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री पाणिनिको कर्मस्थान नेपाल हो। त्यो क्षेत्र अर्घाखाँची र प्युठानको सङ्गमतिर पर्छ। पाणिनिलाई इसापूर्व तीन हजार वर्ष र पतञ्जलिलाई दुई हजार वर्ष पूर्वका ठानिन्छ।
पाणिनिले आफू जन्मेको ठाउँलाई शलातपुर भनेका छन्। त्यो अहिलेको पाकिस्तानस्थित लाहोर हो। उनी लाहोरबाट नेपाल आएर तपस्या गरेर अष्टाध्यायी व्याकरण लेखेका हुन्। त्यसका शास्त्रीय प्रमाणहरू भेटिएका छन्।
प्रमाणहरू के-के छन् ?
पतञ्जलिले आफू जन्मेको स्थानलाई गोनर्द भनेका छन्। गोनर्दमा जन्मिएका हुनाले नै उनलाई गोनर्दीय भनिएको हो। उनको पितालाई चरक आत्रेय भनिन्थ्यो।
उनको आमाको नाम गोणिका थियो। गोणिका शब्द ुगोु शब्दकै अपभ्रंश गोणीबाट विकसित भएको हो। पतञ्जलिले पाणिनिले रचना गरेको अष्टाध्यायी व्याकरणको भाष्य लेखे। यसलाई व्याकरण महाभाष्य भनिन्छ।
त्यस ग्रन्थमा उनले 'म गोनर्दमा जन्मेको हुँ' भनेका छन्। उक्त ग्रन्थमा गोनर्द शब्द चारपटक आएको छ। तर गोनर्द कहाँ पर्छ भन्नेमा अध्येताहरूबीच एकमत छैन। कसैले भारतको मध्यप्रदेशस्थित उज्जैनमा पर्छ भनेका छन्। अरूले भारतकै कश्मीर, काशी र उत्तर प्रदेशस्थित गोण्डालाई पनि उनको जन्मस्थलका रूपमा मानेका छन्।
ग्रन्थहरूका व्याख्याकारहरूले गोनर्द आर्यावर्त्तको प्राच्य देशमा पर्छ भन्ने व्याख्या गरेका छन्। विष्णुराज आत्रेयले योगका प्रवर्तक पतञ्जलि नेपालमै जन्मेको दाबी गरेका छन् । अहिलेको अर्घाखाँची क्षेत्रमा गाईको सङ्ख्या धेरै भएको कुरा विभिन्न शास्त्रहरूमा पुष्टी गरिएको छ।
अयोध्याका राजा दशरथकी औरस पुत्री तथा अङ्गदेशका राजाकी पोष्यापुत्री राजकुमारी शान्ताको विवाह हाल मधुवनधाम कपिलवस्तुका युवा ऋषि ऋष्यशृङ्गसँग भएको कथन छ।
तिनले दाइजोमा असल जातका एक लाख गाई पाएका थिए। ती गाईका सन्ततिले नर्त्तनाचल परिक्षेत्र ढाके। त्यसको पहाडी भेगलाई गोपर्वत भन्न थालियो भने तराई भेगलाई गोशृ भनियो।
उक्त गोपर्वतलाई पाणिनीले तपस्या गरेको स्थान मानिन्छ। त्यसलाई अहिले पनि पणेना भनिन्छ। यस आधारमा त्यस क्षेत्रमै गोनर्द पनि पर्छ भन्न सकिन्छ। गोनर्द संस्कृत शब्द हो। यस प्रदेशमा पहाड र तराई दुवै भाग पर्छन्।